Joshụa 13 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ala ndị Izrel na-emeribeghị (1-7)
E kere ala ndị dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan (8-14)
Ala ebo Ruben ketara (15-23)
Ala ebo Gad ketara (24-28)
Ala ebo Manase ketara n’ebe ọwụwa anyanwụ (29-32)
Ọ bụ Jehova ka ebo Livaị ketara (33)
13 Ugbu a, Joshụa emeela agadi, kaa ezigbo nká.+ Jehova wee sị ya: “I meela agadi, kaa ezigbo nká. Ma, a ka nwere ala buru ezigbo ibu unu na-ewegharabeghị. 2 Unu ewegharabeghị ala ndị a:+ ala ndị Filistia niile na ala ndị Geshọ niile+ 3 (malite na Shaịhọ* nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ* Ijipt ruo n’ókè Ekrọn n’ebe ugwu, bụ́ ala a na-ewere na ọ bụ ala ndị Kenan).+ Unu ewegharabeghịkwa ala ndị eze ise na-achị ndị Filistia,+ ya bụ, ala ndị Gaza, ala ndị Ashdọd,+ ala ndị Ashkelọn,+ ala ndị Gat+ na ala ndị Ekrọn.+ Ala ọzọ bụ ala ndị Avim+ 4 n’ebe ndịda. E nwekwara ala ndị Kenan niile nakwa Meara, bụ́ ala ndị Saịdọn,+ ruo n’Efek, ruokwa n’ókè ndị Amọraịt. 5 E nwere ala ndị Gibal+ na Lebanọn niile nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, malite na Bel-gad nke dị n’ala ala Ugwu Hemọn ruo Libo-hemat.*+ 6 E nwekwara ala ndị bi n’ebe bụ́ ugwu ugwu, malite na Lebanọn+ ruo Misrefọt-meyim,+ na ala ndị Saịdọn niile.+ M ga-achụpụ ha ka ndị Izrel bichie ebe ahụ.+ Naanị ihe ị ga-eme bụ ikenye ndị Izrel ala ahụ ka ọ bụrụ ihe ha ketara, otú m nyere gị n’iwu.+ 7 Ugbu a, keere ebo itoolu nakwa ọkara ebo Manase ala a ka ọ bụrụ ihe ha ketara.”+ 8 Ọkara ebo Manase nke ọzọ na ebo Ruben nakwa ebo Gad ketara ala Mosis nyere ha n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan. Ebe ahụ ka Mosis ohu Jehova nyere ha.+ 9 O nyere ha malite n’Aroa,+ nke dị n’akụkụ Ndagwurugwu Anọn,+ na obodo dị n’etiti ndagwurugwu ahụ, na ala Medeba niile nke dị larịị, ruokwa Daịbọn. 10 O nyekwara ha obodo niile Saịhọn eze ndị Amọraịt si na Heshbọn na-achị, ruokwa n’ókè ala ndị Amọn.+ 11 Ọ bụkwa ha ketara Gilied na ala ndị Geshọ na nke ndị Meakat+ na ala niile dị n’Ugwu Hemọn na Beshan niile+ ruo Saleka.+ 12 Ha ketakwara ala niile dị na Beshan ebe Ọg chịrị. Ọg chịrị n’Ashtarọt nakwa n’Edraị. (O so ná ndị Refeyim ikpeazụ fọrọ ndụ.)+ Mosis meriri ha, chụpụkwa ha n’ala ha.*+ 13 Ma, ndị Izrel achụpụghị+ ndị Geshọ na ndị Meakat n’ala ha.* Ha na ndị Izrel bikwa ruo taa. 14 Ọ bụ naanị ebo Livaị ka ọ na-ekenyeghị ala ọ bụla.+ Ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwere ha ná nkwa+ bụ na ha ga na-ewere ụfọdụ n’ime ihe ndị e ji chụọrọ ya àjà ndị a na-esu ọkụ.+ Ọ bụ ya bụ ihe ha ketara. 15 Mgbe e mechara, Mosis nyere ebo Ruben ala ha ketara n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 16 Ala ha ketara bụ Aroa, nke dị n’akụkụ Ndagwurugwu Anọn, na obodo nke dị n’etiti ndagwurugwu ahụ, nakwa ala niile dị larịị nke dị n’akụkụ Medeba. 17 Ha ketakwara Heshbọn na obodo ya niile+ dị n’ala dị larịị, nakwa Daịbọn, Bemọt-bel, Bet-bel-mion,+ 18 Jehaz,+ Kedemọt,+ Mefat,+ 19 Kiriateyim, Sibma,+ Ziret-sheha nke dị n’ugwu dị nso na ndagwurugwu, 20 Bet-piọ, ebe mkpọda Pisga,+ Bet-jeshimọt,+ 21 obodo niile dị n’ala dị larịị, nakwa ebe niile Saịhọn eze ndị Amọraịt chịrị, onye si na Heshbọn na-achị.+ Mosis meriri ya+ na ndị isi Midian, ya bụ, Ivaị, Rikem, Zọọ, Họọ, na Riba.+ Ha bụ ndị Saịhọn mere ndị isi. Ha bibukwa ebe ndị ahụ. 22 Belam+ nwa Biọ, onye na-agba afa,+ so ná ndị ndị Izrel ji mma agha gbuo. 23 Ebe ala ebo Ruben kwụsịrị bụ n’Osimiri Jọdan. Ala a ka ebo Ruben ketara n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ha ketakwara obodo ndị dị n’ala ahụ na ógbè ha niile. 24 Mosis kenyekwara ebo Gad ala, n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 25 Ala ha ketara bụ Jeza+ na obodo niile dị na Gilied, nakwa ọkara ala ndị Amọn+ ruokwa Aroa, nke dị n’ebe e si aga Raba.+ 26 Ha ketakwara si na Heshbọn+ ruo Remat-mizpe na Betonim, sikwa na Mahaneyim+ ruo n’ókè Diba. 27 Ha ketakwara obodo ndị dị na ndagwurugwu, ya bụ, Bet-heram, Bet-nimra,+ Sọkọt,+ na Zefọn, bụ́ ebe ndị fọdụrụ n’ebe Saịhọn eze Heshbọn chịrị.+ Ala ha si n’ebe ọwụwa anyanwụ Osimiri Jọdan ruo n’Oké Osimiri Kineret.*+ 28 Ala a ka ebo Gad ketara n’ezinụlọ n’ezinụlọ. Ha ketakwara obodo ndị dị n’ala ahụ na ógbè ha niile. 29 Mosis kenyekwara ọkara ebo Manase ala, n’ezinụlọ n’ezinụlọ.+ 30 Ala ha ketara bụ Mahaneyim,+ Beshan niile, ebe niile Ọg eze Beshan chịrị, na obodo niile Jeya nwe,*+ ndị dị na Beshan, nakwa obodo iri isii. 31 Ọkara Gilied, na Ashtarọt na Edraị,+ bụ́ obodo ndị dị n’ebe Ọg chịrị na Beshan, ka e nyere ụmụ Mekia+ nwa Manase, ya bụ, ọkara ụmụ Mekia n’ezinụlọ n’ezinụlọ. 32 Ala ndị a ka Mosis kenyere ha, mgbe ha nọ n’ọzara Moab, ma a gafechaa Osimiri Jọdan, n’ebe ọwụwa anyanwụ Jeriko.+ 33 Ma, Mosis enyeghị ebo Livaị ala.+ Jehova bụ́ Chineke Izrel ka ha ketara, otú o kwere ha ná nkwa.+
^ Ma ọ bụ “otu mpaghara Osimiri Naịl.”
^ Na Hibru, “n’ihu.”
^ Ma ọ bụ “napụkwa ha ala ha.”
^ Ma ọ bụ “anapụghị ndị Geshọ na ndị Meakat ala ha.”
^ Ya bụ, obodo ndị bi na ha bicha n’ụlọikwuu.